Uhlola kanjani ukuthi isigqoko sakho sivikelekile? - Izigqoko Zokuzivikela
Main > Izigqoko Zokuzivikela > Ukuhlolwa kwesigqoko - izimpendulo ezivamile
Ukuhlolwa kwesigqoko - izimpendulo ezivamile
Uhlola kanjani ukuthi isigqoko sakho sivikelekile?
Hlolaphakathi ne-eyakhoikhanda. Ngokuvamile,uyazi uma isigqoko sokuzivikelauthatheukuukushaya okuhle, ngobaukuukushaya kahle kuisigqoko sokuzivikelakuyintoukuukushaya kahle kuiikhanda, kusho uPaki. Ngisho njeiumsindo weiumthelela nomaiindlelaeyakhoikhanda lizwakala ngathiuma ushaya kanzima ngokwanele ukubona izinkanyezingikutshele uma isigqoko sokuzivikelakufanele ithathelwe indawo.
i-viagra nokuzivocavoca umzimba
Sawubona, igama lami nginguRyan F9. Futhi namhlanje sichitha ama- $ 300 Scorpion EXO-R710 kanye ne- $ 30 AHP. Isigqoko sokuzivikela.
Nginesiqiniseko sokuthi le nto ayinalo igama langempela. Ukuvunywa kwe-ECE ne-DOT nakho kuyangabazeka ngokufanayo. Ngoba ngaphandle kokuthi lokhu kuyisiShayina soMnyango Wezokuthutha, kubonakala ngathi akunazitifiketi zomthetho.
Umthengisi ku-ebay futhi ubiza lokhu ngokuthi 'igobolondo elihle kakhulu futhi elihle le-ABS'. Kepha isitikha lapha sithi i-polycarbonate, ayipelwanga kahle. Bese kuba neqiniso lokuthi ifike isesikhwameni sikadoti.
Ayikho ikhava ye-microfiber, ayikho ibhokisi, akukho ukuvikelwa. Kungakhathaliseki ukuthi lesi sigqoko sokuzivikela sasinezinga elingakanani lokuphepha, kungenzeka sithintwe kuphela ukuthunyelwa. Ngaphezu kwalokho, isigqoko sokuzivikela sinuka kakhulu iglu kangangokuba ngizizwa ngiphezulu uma ngisigqoka ngaphezu kwemizuzu emihlanu.
Kodwa-ke, isivivinyo sethu sokuqala sokuphahlazeka yi-visor ye-'Ellip-Tech 'engenamanzi, evala isivalo sesiqu seBentley ngokushaya okukodwa okuwujuqu. Ngenkathi isigqoko se-AHP sivala ngomsindo ocasulayo kakhulu, ukuvuleka komoya emhlabeni wonke kubukeka sengathi kwenzelwe esinye isigqoko sokuzivikela, ngoba ngaphandle kwezimbobo kugwebu lwe-EPS, ukuvuleka komoya akuholeli ndawo. Kodwa-ke, i-AHP inayo le zipper entanyeni efudumele.
Angikwazi ukunquma ukuthi lokhu kungukuqamba noma kuyisiphukuphuku. Awu, ngisamile. Angazi.
Manje. Ukuvimbela umsindo. Ukuhlolwa kwethu okulandelayo yi-Puncture Resistance, mangaki amashothi angena kugobolondo ne-visor yesigqoko sokuzivikela ngasinye.
Kubukeka njengokudubula okuyisithupha ukudlula kugobolondo likaScorpion. Futhi ukudubula okukodwa nje kuphela ukuthola i-AHP's 'ABS / Polycarbonate' shell shell. Iphinde yadlula nge-EPS futhi yaduduza amagwebu ngaphansi.
Yebo, isibhamu sesithathu esifakwe ngaphakathi kwe-scorpion's visor. Lokho kuvamile, ukungcola okungcwele, futhi. Akujwayelekile lokho.
Ukudubula okukodwa nje ukushaya imbobo elingana nosayizi ngokusebenzisa i-visor ye-AHP. Manje isivivinyo esimnandi. Yebo, mnumzane.
Ngakho-ke isigqoko sokuzivikela esisemthethweni siphase kahle ohlangothini, phezulu nangemuva kokuhlolwa komthelela. Okwamanje, ubuhle be-bargain sebubeke ngaphezulu kwe-100 G kubo bobathathu. Kepha lokho akumangazi uma ubheka usayizi wazo.
Bona ukuphoxeka kwe-ebay kuncane kakhulu futhi kulula kuma-gram ayi-1,175 Manje ngisho ne-'shit Sherlock 'ingadonsa i-AHP, ayibekanga mpikiswano enkulu lapha. Ukumelana nemihuzuko! Isigqoko sokuzivikela se-Scorpion yi-'Tri-Matrix '
Yiziphi izivivinyo ezenziwe yizigqoko zokuzivikela?
Lokhuukuhlolwaifaka uchungechunge lwemithelela elawulwayo lapho iisigqoko sokuzivikelaibekwe kwifomu lekhanda lensimbi yabe sehla ngokuwa okuqondisiwe kwinsimbi ehlukahlukeneukuhlolwaama-anvils (Flat, Hemisphere, Kurbstone, Roll bar, Edge noma uhlobo lweHorseshoe) elingisa izindawo ezihlukile zomthelela.
(umculo oshubile) - Ukudideka kuhlale kungqubuzana kwezicubu zobuchopho ethanjeni logebhezi. Kepha ezimweni eziningi akukutsheli ukuthi ulimale kuphi - Uma uthenge noma ucabangele isigqoko sokuzivikela esisha eminyakeni embalwa edlule, maningi amathuba okuthi ubone okuthile okubizwa nge-MIPS. IMIMPS ngumkhiqizo owasungulwa ngo-2007.
Futhi kusukela lapho uthengise amadivayisi wabo angaphezu kwezigidi eziyisishiyagalolunye. Kepha yini ama-MIP? Yenzelwe ini? Yakhiwa kanjani? Ngangimenyelwe ngapha, eSweden, ukuthola ngqo lokho. (umculo othambile we-elekthronikhi) Njengabagibeli bamabhayisikili, iningi lethu libe nengozi noma kungenzeka libe nengozi ngokuzayo, futhi lokho kungifaka nami.
Singahlangabezana nento ebizwa nge-concussion. Izimpawu zokuqubuka ziyabonakala. Kepha kusho ukuthini ukushayisana? Kubukeka kanjani ngempela ebuchosheni? Ukuze sithole, sakhuluma noHans.
I-neurosurgeon kanye nomsunguli we-MIPS.- Impikiswano, okuyigama elijwayelekile lokugoqelwa kwezicubu zobuchopho kugebhezi, i-Co concussion isho lukhulu. Kepha udinga ukwazi ukuthi cishe amaphesenti angama-80 ezimpikiswano amnene.
Ngenkathi amaphesenti ayi-10 esesilinganisweni kanti amanye alimele kanzima ekhanda. Zonke lezi zigaba zifakiwe empikiswaneni yokuthola impendulo kontanga yakho, noma noma yini othole ukushayisana, ayisho kangako. I-concussion can ihlale ingukuthuthumela kwezicubu zakho zobuchopho ethanjeni logebhezi.
Kepha akusho ukuthi uzilimaze kuphi ezimweni eziningi. Manje, uma unokulimala okuncane ekhanda kusuka ekuxakekeni futhi wenza i-CT noma i-MRI scan, kungenzeka ungaboni lutho. Kodwa-ke, uma unokulimala okulinganiselayo kuya kokubi kakhulu kwekhanda, nakho okuyinkinga, khona-ke uzobona okuningi.
Kepha ukungqubuzana okukhulu kungenxa yokulimala okuncane ekhanda ongakwazi ukukuchaza. Ngangizobona kanjalo. (umculo omnandi) - Manje sengijoyine uPeter Halldin, umsunguli we-MIPS.
Ngithemba ngubani engizobuza imibuzo embalwa enzima kuze kube namuhla, ngiyethemba y. Futhi uthole izimpendulo ezimbalwa engingazazi okwamanje. Ngakho-ke uPeter, khuluma nami ngokuqala kweMIP? Kwakuyini usuku lokuqala Kwakubukeka kanjani lokho? - Konke kwaqala ngenkathi ngiqala ukuhlangana noHans Van Holst, udokotela ohlinzayo wobuchopho, wangibuza ukuthi ngabe ngifuna ukwenza iPhD, futhi bengingaqiniseki ngempela ukuthi ngifuna ukukwenza lokho, kepha ngithe uHans wathi ' ngizozama.
Futhi saqala ukufunda nge-anatomy nekhanda lomuntu nobuchopho. UHans wayefuna ukwazi ngakho, kepha ngangingazi. Ngakho-ke ngathi kuHans, 'Ngakho-ke mhlawumbe singasebenzisa uhlelo lokuphepha' esinalo ekhanda lethu ebuchosheni. 'Buphi ubuchopho? ingashelela kugebhezi. 'Ku-cerebrospinal fluid.' Ngakho-ke, uHans wathi, 'Yebo, ngicabanga ukuthi umqondo omuhle lowo.' Ngakho-ke saqala ukusebenza sizungeza lowo mbono futhi sabona ukuthi kungenzeka yini ukusifaka esigqokweni, futhi emuva lapho sasingazi kangako ngezigqoko zokuzivikela.
Ukuthi izivivinyo zethu zokuzivivinya zivivinywa kanjani, noma ukuthi siwa kanjani ebhayisikili noma isithuthuthu ay, izigqoko zokuzivikela zivivinywa kuphela ukuwa okumsulwa okuqonde mpo, kuphela ukukala ukushesha okuqondile, futhi saqonda khona manjalo, awu, sinokuthile okuhle ngalo mbono onganciphisa amandla okujikeleza adluliselwe ebuchosheni bakho ngenye indlela. Ngoba ubuchopho bakho buzwela kakhulu ekuzungezeni. Futhi lokhu kukuzungeza lapho uwa phansi ekhoneni.
Ngakho-ke bekuyindlela yokuhlanganisa izingcezu ku-puzzle. Ngolwazi olutshelwa ngalo. Futhi kusukela lapho saqonda ukuthi kuwumqondo omkhulu, omuhle, futhi kungenzeka senze ushintsho olukhulu.
Futhi wehlise inani lokulimala. Ukhulume into ebizwa nge-rotational motion namuhla. Angikaze ngiyizwe leyo nkulumo.
Kuyini ngempela ukunyakaza kokujikeleza? Futhi unjani umshini owawuklama futhi waklanyelwa ukunciphisa ukulimala okudalayo? - Ngicabanga ukuqonda ukuzungeleza ongathatha umshayisibhakela, isibonelo. Ungama ukuzishaya kusuka emivimbo eqondile nxazonke ngemuva komjikelezo. Futhi-ke ngokuzumayo bazothola ukusika okuphezulu, bathola ukujikeleza.
Futhi-ke bakhishwa ngaphandle. Ngakho-ke ikhanda nobuchopho bomuntu buzwela kakhudlwana kulokhu kuzungeza kunokunyakaza okuqondile, okusemhlabathini e-engeli, ngomqondo ongokomfanekiso, isigqoko sokuzivikela singena emhlabathini, bese uthola lokhu kujikelezisa isigqoko sokuzivikela. Futhi njengoba amabutho ephezulu kangaka, isigqoko sokuzivikela sidlulisela lokhu kuzungeza siye ekhanda.
Esikwenzayo ngezigqoko zokuzivikela ze-MIPS ukuthi sinolwelwesi olushelelayo olungahamba kuzo zonke izinhlangothi, amamilimitha ayi-10 kuye kwayi-15. Ngakho empeleni silingisa ukuthi uwela eqhweni. Ngakho-ke uma uwela eqhweni ikhanda lizoqhubeka liqonde lapho kufanele lihambe khona futhi lizungeze.
Sinakho kulokhu ungqimba olushelelayo. Ngakho-ke sine-coefficient ephansi kakhulu yokungqubuzana phakathi kwalolu ungqimba nesigqoko sokuzivikela. Bese siqondisa kabusha amandla kusuka ekushintshaneni kuye ekuhumusheni.
Futhi ngakho-ke sinciphisa ukunyakaza kokujikeleza ekhanda nasebuchosheni. (umculo omnene we-electron ic) - Kuthathe isikhathi esingakanani ukuthola idizayini oyisebenzisayo njengamanje? Futhi ingabe uhlala uthuthukela ukwakheka okusha ngokuzayo? Noma ingabe lo mklamo manje ozosebenza unomphela? - Sihlala sakha izinhlelo ezintsha namanje. Sisafunda ngokulimala ekhanda.
Ukudideka, isibonelo, ukulimala okuyigama nje lesimpawu. Noma kunjalo, luseluningi ucwaningo okufanele lwenziwe ukuqonda kahle ukuthi yini okonakele ebuchosheni. Kepha ukuphela kwento esiyaziyo namuhla lokhu kudideka nokunye ukulimala okungathi sína kobuchopho kudalwa yilo mnyakazo wokujikeleza kwekhanda.
Futhi lokho esikwenzayo empeleni, okuwukuphela kwento esiyenzayo ngesigqoko sokuzivikela se-MIPS nemikhiqizo ehlukahlukene ye-MIPS, ukuthi sinciphisa amandla ajikelezayo adluliselwa ebuchosheni lapho singazi kahle ukuthi yimaphi amandla engikushaya ngawo ukuze uthole ukuxubana. Siyazi ukuthi umthelela omncane ungcono ekhanda lakho nasengqondweni yakho. Futhi yilokho esikwenzayo ngesigqoko sokuzivikela se-MIPS (umculo we-elekthronikhi) - angiqiniseki ngokuphelele ukuthi ngabe kufanele ngibize leli gumbi ngokuthi ilabhoratri yokuhlola, igumbi lehhovisi noma igumbi lokuzivocavoca elinamakhono amaningi.
Ngoba bheka lokhu, banakho konke ongakudinga ukuqeqesha ku-MIPS. Amakhefu emini futhi. Kukhona ibhentshi lesisindo.
Unohlobo lwe-stepper, umshini wokugwedla. Futhi-ke kunenqwaba yamabhodi ebhalansi namabhola wokuzivocavoca. Izintambo eziningi.
Futhi into ebaluleke kakhulu, wonke amabhayisikili, laphaya anekamelo eligcwele namabhayisikili asezintabeni, namasondo ambalwa ajikelezayo futhi, futhi uma uqeda ukuqeqeshwa eMIP kunekamelo elipholile impela, onalo ukuya ku. Yinye kuphela indawo ongaya kuyo. Leli igumbi lokuhlikihla.
Kubili kuya kwelesine, ngakho-ke ngisheshe ngivunyelwe ukubekwa kwami ​​ngehora lesine. Kepha angisakwazi ukulinda ukuthola ukubhucungwa. (umculo othambile we-elekthronikhi) Kunesikhungo sokuhlola se-MIPS emhlabeni wonke lapho futhi ngizoya ezansi ngiyohlangana nenhloko yezokuthuthukiswa komkhiqizo, uMarcus Seyffarth, umthetho olandelwayo wokuhlola isiteshi, futhi uzokhombisa ukuthi usebenza kanjani, futhi ngokusobala uyahamba ukusebenzisa ikhanda elinokufana okungaqondakali nokwami ​​okwakhiwe nosayizi. (umculo omnene we-elekthronikhi) Kulungile, sengiselebhu yokuhlola manje.
Futhi ngijoyinwa nguMarcus owokuqala, oyinhloko yokuthuthukiswa komkhiqizo. Ngibiza uMarcus, uMarcus owokuqala, ngoba ungomunye wabahlanu bakaMarcus lapha ku-MIPS Test Log ukuthi Uwavivinya Kanjani Ama-Helmet. Futhi uzosikhombisa izivivinyo ezithile, akunjalo? - Yebo Yebo.
Ngakho-ke sisekomkhulu le-MIPS eStockholm. Lesi isitendi sokuhlola seHalldin esisetshenziswa ngaso sonke isikhathi lapho sihlola izigqoko zokukhiqiza nokwamukelwa. Vele, siyisebenzisela nokwenza imikhiqizo emisha.
Futhi ngizokukhombisa nje izivivinyo ezimbalwa. Sivivinya ngokushesha ukujikeleza. Sivivinya futhi maqondana ne-angled anvil, i-angle engu-45 degree.
Isigqoko sokuzivikela sebhayisikili esilivivinya ezindaweni ezintathu ezahlukene zomthelela. Siyasihlola, uma isandla sami siyisihlava, sisivivinya kuleli phuzu lokuhlola eliphambili. Ukuqinisekisa ukuthi i-MIPS, ebhekise kokunye, ingahamba izinhlangothi zonke.
Kepha senza isiqiniseko sokuthi kuhamba ngokukhululeka kulelo banga ngalesi sivivinyo. Sivivinya ngale ndlela, esiyibiza ngohlangothi. Vele, sihlola ukuthi uhlelo lwe-MIPS lokuvikela ubuchopho luhamba ngaleyo ndlela.
ibhayisikili kagesi nyc umthetho 2017
Bese kuthi ekugcineni siyihlole kulokho esikubiza ngomthelela oblique engizowubona empilweni yangempela. Ngakho-ke umthelela kuleli qophelo kusigqoko sokuzivikela. Lapho kwenzeka khona izingozi eziningi zebhayisikili, ngingathi - Kulungile, ngingayithatha yini ikhanda lakho lokuhlola? Emzuzwini edlule le nto ibisisisindo sethani.
Ngokusobala ngosayizi, kahle, ngosayizi, yinhloko engu-58cm, akunjalo. Lokho ngusayizi wami wangempela wekhanda naja. Kulokhu angikholwa ukuthi iqine kangakanani intamo yami.
Ngoba lokho akulula, akunjalo? - Lokho ngama-42 kg. - Kulungile. - Sinamakhanda ahlukene wokuhlola izigqoko zokuzivikela ezahlukahlukene s sinosayizi ophakathi, sinosayizi wengane, usayizi omkhulu owengeziwe.
Zonke zinesistimu ye-accelerometer yokuqoqa idatha. Kepha futhi ne-gyro yokuqinisekisa ukuthi kufanele sibeke isigqoko sokuzivikela kahle ngaphambi kokusetha noma yikuphi ukuhlolwa - Kulungile, kulungile, ngizokunikeza lokho - Kulungile, ungasifaka esigqokweni. Ngakho-ke lapho sivivinya sizama ukukwenza ngendlela ojwayele ukusebenzisa ngayo isigqoko sokuzivikela ukubeka uthambo lwesilevu kahle.
Ubungeke - nginezami kahle. Uyazi, uzulazula ezansi lapho ndawo ndawo. - Ibeke ngendlela yokuthi ikhala lihle emaphethelweni wesigqoko sokuzivikela, ejwayelekile.
Sizoba naleli thuluzi elincane lokuqinisekisa ukuthi liqondiswe kahle ngokuya ngemininingwane yesigqoko sokuzivikela. Njalo isigqoko sokuzivikela sinenkomba yalelo banga. Uma lokho sekuphelile, lungisa ngokuqinile uhlelo, ulubeke ebhentshini lokuhlola.
Futhi ibhentshi lokuhlola lizokwazi kusuka kuskena sami ukuthi yikuphi ukuphakama, ukuthi iyiphi indawo enomthelela nakho konke. I-instrumentation inokuxhumeka kwe-ac kulolu hlelo lokusebenza, okusitshela ukuthi ikhanda likuphi empeleni. Ukuze sikwazi ukusetha ngokufana lapho sivivinya lapho sihlola isigqoko sokuzivikela sokuqala kanye nenguqulo ye-MIPS yesigqoko sokuzivikela.
Lapho senginakho ukufundwa, izinombolo engifuna ukuba nazo, ngimane ngidonse isigwedlo esiphethe ikhanda nesigqoko sokuzivikela ngesikhathi sokuwa kwamahhala kwangaphambi komthelela. Ukukhululwa kwe-lever kungama-50 cm kuphela ngaphezulu kwe-anvil. Ngemuva kwalokho ingahamba.
Valiwe kukhompyutha. Cindezela inkinobho ukuyithatha bese uyiphonsa futhi. (umculo oshubile we-elekthronikhi) - Ngakwesokudla, isivivinyo besingaphaya futhi imiphumela ilapha, akunjalo? - Yebo.
Ngakho-ke yonke idatha yokuhlola isondeza ngekhebula kwikhompyutha bese iya kulolu hlelo. Ngokuyisisekelo sibona ukushesha okuqondile lapha. Futhi njengoba ukwazi ukubona ku-athikili, ukuhamba kancane kusuka kumthelela.
Ngakho-ke amafreyimu ayi-1 000 ngomzuzwana ngokuhamba kancane. Singasithatha isithombe ngesithombe uma ufuna ukuhlaziywa okusheshayo. Qhathanisa nezinguqulo ezimbili eceleni, futhi d konke lokho - Kulungile.- Futhi kumidwebo lapho ungabona imigqa ephuzi ngokuluhlaza nokumhlophe, imingcele ehlukile ye-x, y, z,.
Futhi phakathi kwale migqa kungama-millisecond amahlanu wesikhathi - yebo, uma ucabanga ukuthi ukucwayiza kuthatha ama-millisecond ayi-100. - Uqinisile - Lokho kusho ukuthi imiphumela isiphelile ungakaqapheli ukuthi yenzekile - Yebo, ngakho-ke isikhathi esifushane kakhulu ongasindisa impilo yakho - Ngakho-ke lo mphumela ungaba kuma-millisecond ayisishiyagalombili adlulayo. Ngingakukhombisa nezinye izingxenye zayo.
Sibonile ukushesha kwe-angular kanye ne-angular velocity. Izingxenye ezifanayo onazo, okuluhlaza okotshani, okumhlophe nokuphuzi. I-angular velocity ihlangana nobunzima nokuthi Ukudabuka kwezicubu zobuchopho ikakhulu. - Futhi yilokho impela uhlelo lwe-MIPS lokukhanyisa imisebe, akunjalo? - Uqinisile.
Ngakho-ke leyo nombolo kuzoba ukugqamisa noma i-combo esiyibukayo lapho siqhathanisa ama-MIP kanye nama-non-MIP helmet. Futhi ungabona ukuthi ungathola amaphuzu aphansi kwizigqoko ze-MIPS - Kulungile, emzuzwini owedlule ushilo ukuthi ngemuva kokuhlolwa okuningi, okuningi njengalokhu, uthola ukuthi isigqoko sokuzivikela esingewona ama-MIPS sizwakala sihlukile. Kepha futhi nokuthi empeleni kufanele ubambe isigqoko sokuzivikela ngokuhlukile.
Ukuthi igxumela phezulu kakhulu emoyeni. Akusekho ukubamba okuncane ngoba amandla amuncekile. Amandla asesigqokweni futhi asakhishwa kwenye indawo - yebo, impela.
Ngiqonde ukuthi, njengoba empeleni sikuqondisa kabusha amandla, indiza eshibilikayo, ama-MIPS, uthola amandla, esikhundleni sokuthola ukweqa okuphezulu, uthola-- yebo, ngakho-ke ubungeke uzizwe nje ekhanda lakho uma ukwenzile Ingozi ibizokubona nawe ubona ukuthi ibingeyimbi kangako. Amandla amuncwe uhlelo lwakho - yebo, impela. (umculo othambile we-elekthronikhi) - Ngabe ucabanga ukuthi kunolwazi olwanele nemfundo ngemiphumela yokushayisana nokulimala ebuchosheni okunyakaza ngokujikeleza? - Okubaluleke kakhulu ukuthi abantu bagqoke isigqoko sokuzivikela.
Ngakho-ke, ngiqonde ukuthi, leyo yinto ebaluleke kakhulu. Ukuthi unesigqoko sokuzivikela lapho ugibela ibhayisikili. Noma ushayela nje uye emsebenzini noma nje iqhele ibangana.
Siyabona ukuthi izingozi eziningi noma eziningi zalezo zimfushane n uvele uye esitolo uyothenga noma yini. Beka isigqoko sokuzivikela. Ngigqoka isigqoko sokuzivikela nsuku zonke.
Kufana nokuthi ubopha ibhande emotweni. Kimi kuhamba ngaphandle kokusho. Kwamanye amazwe aseYurophu, ukusetshenziswa kwesigqoko sokuvikela ikhanda akuvamile njengokuvamile eSweden.
Kepha uma uqonda ukuthi ikhanda nobuchopho bomuntu bubucayi kangakanani, khona-ke ufuna ukuba nesigqoko sokuzivikela futhi ube nesigqoko sokuzivikela esiphephe ngangokunokwenzeka namuhla esivivinywa umthelela omsulwa omile, ukuze ungawi. Uwa engela. Futhi ingathola ukujikeleza.
Futhi siyazi ukuthi ubuchopho buzwela kakhulu ekuhambeni okujikelezayo. Ngakho-ke ngethemba lokuthi izigqoko zokuzivikela zizobangcono eminyakeni eyishumi ezayo. Futhi ngethemba ukuthi izigqoko zokuzivikela eziningi zizoba nohlelo lokulwa nokujikeleza. (Cheeky electronic music) - Uma kukhulunywa ngokuzikhethela isigqoko sokuzivikela, ngincika ezintweni ezimbalwa, ngizinze kulokho kubuhle besigqoko sokuzivikela.
Ibukeka kanjani uma ngiyigqoka? Kunethezeke kanjani? Ingabe kulula? Ngabe iphefumula kahle angikaze ngicabange ukuthi ivikela ikhanda lami ngempela yini? Ngoba ngihlala ngicabanga ukuthi isigqoko sokuzivikela esiphezulu sizokwenza lokho nje. Futhi angikaze ngicabange ngokunyakaza kokujikeleza umzuzwana. Into ebengingakaze ngiyizwe kuze kube namuhla.
Kepha manje ngiyaqonda ukuthi uma sinenye yalezi zingozi, yilokho empeleni okulimaza ubuchopho bethu. (umculo oshubile we-elekthronikhi) Lo mbulunga weqhwa ulingisa ukunyakaza okujikelezayo okudluliselwa ebuchosheni. Futhi izigqoko eziningi zivivinywa ngokuhlolwa okuqondile okuqondile okufana nalokhu.
Uma ubheka embulungeni yeqhwa, uzothola ukuthi iqhwa alikanyakazi. amabala Cabanga ukuthi lobu ubuchopho bakho manje futhi sizama ukubheka i-angular velocity. njengoba sikuthola emabhayisikili ethu.
Futhi-ke uqala ukubona imiphumela yengozi enjalo noma ingozi. Futhi yingakho uhlelo lwe-MIPS lwakhiwa. Yenzelwe ukunciphisa imiphumela futhi ivimbele ukulimala kobuchopho.
Uma kukhona okufundile, nikeza le ndatshana isithupha namhlanje. Futhi ukuthola ama-athikili amaningi chofoza lapha ngezansi.
Ngabe kusiza izigqoko zokuzivikela ezishibhile?
Izigqoko ezishibhile zokuphahlazekakungaphepha njengalezo ezibizayo. Cishe abanazo izici futhi baqeda, kepha bangabukeka bepholile futhi.
Kuyini ukuhlolwa okubukhali?
SHARP(i-Safety Helmet Assessment and Rating Programme) wuhlelo lokulinganiswa kwekhwalithi kahulumeni waseBrithani wezigqoko zokuhamba ngezithuthuthu, olusungulwe ngo-2007, ngenhloso yokwenza ngcono ukuphepha kwezithuthuthu emigwaqweni yase-UK. Ama-Helmet akhethelwe i-ukuhlolwabySHARPzithengwa kubathengisi babathengi.
Isiguli esizohlola namuhla sibizwa ngokuthi uMatthew, indoda eneminyaka engu-45 ubudala enempilo enhle ejwayelekile eye yathuthukisa ubuhlungu obushisayo emlenzeni wayo wangakwesobunxele kuye enyaweni futhi nobuhlungu beqolo obukade bukhona amasonto ambalwa futhi obonakala ngathi ziba zimbi kakhulu. Ukutholakala okungenzeka kobuhlungu obukhulu yilokho esizohlola ngokwenza ukuhlolwa kwezinzwa.
Kulungile, uMatt ulele lapha embhedeni futhi sizohlola izitho zakhe ezingezansi ngombono wezinzwa. Kuhlala kubalulekile ukukhumbula ukuhlola isikhumba esisodwa kwesinye futhi eyodwa ngakho-ke ngigxile kuma-L4, L5, kanye nama-S1 dermatomes ohlangothini ngalunye, ngidlula engxenyeni ephakathi yenkonyane, ingaphakathi lonyawo, nengxenye eseceleni kwe, ngokulandelana Ukuqala nge-Light Touch, ngithanda ukusebenzisa ichopho lebhulashi ukuvivinya ukuthinta okulula, noma ngabe uma ungenalo ibhulashi okuthile okufana neduku eligoqiwe kulungile. Ngakho-ke, Matt, uyakuzwa lokho? Yebo, ungangizwa ngikuthinta lapho? Yebo futhi lapho? Yebo kuthiwani lapha? Yebo, futhi lapho? Yebo futhi lapho? Lokho kulungile kancane, ngakho-ke lokho kuncane? Yebo, bese kuba lapho lapho kuqhathaniswa nalapho.
Kulungile okufanayo. Ngakho-ke kubukeka sengathi kungahle kube nokulahleka kokuthinta okuncane okuhambisana noshintsho lwe-L5 dermatome. Ngakho-ke manje ngizoqhubeka nokuhlola umuzwa we-pinprick.
Ngithanda ukusebenzisa i-toothpick yalokhu ngoba iziguli eziningi ezinezinhlungu ze-neuropathic zizozwela kakhulu lapho zine-hyperalgesia, ngakho-ke akufanele usebenzise noma yini ebukhali kakhulu njengoba ezinye zalezi ziguli zingase zibe nokuzwela okukhulu kwezinhlungu. Ngithola ukuthi ukusebenzisa i-toothpick kudala umuzwa wokucija onengozi encane kakhulu yokwenza ukulimala okukhulu noma ukuhlupheka esigulini. Kubaluleke kakhulu ukuqinisekisa ukuthi izivivinyo zakho ziyafana.
Bamba i-toothpick ukuze ishelele ngeminwe yakho ngaso sonke isikhathi lapho uthinta isikhumba futhi lokho kusho ukuthi usebenzisa ingcindezi engapheli njalo. Ngakho-ke ake sidlule kuma-dermatomes ethu futhi nge-toothpick. Matt, ngicela ungitshele, ngabe uzizwa ubukhali? Yebo, futhi lapho? Yebo, futhi lapha? Yebo Futhi lapha? Okuncane okuncane kukhona Ingabe lokho kuncishisiwe kancane? Yebo.
Futhi lapha? Yebo. Ingabe lokho kujwayelekile? Lokho kuvamile, yebo. Yebo, lokho kujwayelekile futhi, KULUNGILE.
Ngakho-ke futhi sinokuncipha komuzwa we-pinprick ofana ne-L5 dermatome ngakwesobunxele. Indlela yokugcina engizoyihlola ingenye ebaluleke kakhulu uma uzama ukuxilonga ubuhlungu be-neuropathic futhi. Lapho sikhona, kuwuphawu olubucayi kakhulu lokuthi kukhona ushintsho ekusebenzeni kwe-nerve futhi futhi kuhlobene kakhulu nokuba khona kobuhlungu be-neuropathic.
Ukuhlola lokhu, sisebenzisa ibhulashi ukuhamba ngamandla esikhunjeni. Ngakho-ke kunokuba umane usule ukuphela kwebhulashi esikhumbeni ngamandla anele nje okugoba izihlakala zebhulashi. Lokhu kwaziwa njengokuhlolwa okunamandla kwe-allodynia test.
Ngakho-ke futhi ngokusebenzisa ama-dermatomes. Kulungile Matt, uyangizwa, Yebo, ukukuthinta lapho? Ingabe lokho kuzwakala kuyinto evamile? Lokho kuzwakala kujwayelekile, yebo Futhi ngapha? Lokhu kujwayelekile ngapha? Okujwayelekile, lelo yi-L5 Yebo, futhi lapho? Yebo Oo-yuh! Kulungile, ngakho-ke ungawuchaza lo muzwa lapho ngihlanza lapho? Kubuhlungu ngakho kubuhlungu? Kubuhlungu futhi kuze kube sekupheleni? Yebo bese kuthi engxenyeni engaphandle Oh, kulungile, kulungile, lokho kuzwakala kujwayelekile ezinhlangothini zombili, kuyafana nhlangothi zombili? Yebo-ke, ngakho-ke kuMat sibonise imiphumela yokwehla kokuzwela ekuthinteni okulula noma i-hypesthesia ukuthinta okukhanyayo nokuncipha kokuzwela ezinhlabeni zenaliti kusekela ukuxilongwa kokungasebenzi kahle kwemizwa esikhunjeni se-L5, njengoba kungaguquguquki ngokweqile bese sikusekela esinqumweni sakho ukuthi ubuhlungu be-neuropathic noma cha.
Ingabe ukulahla isigqoko sokuzivikela kuyasilimaza?
Njaloukulahlanoma ukufaka isipele aisigqoko sokuzivikelaphansi, noma ezinye izindawo eziqinile ekugcineni zizokwehlisa isithunzi se-isigqoko sokuzivikelaukusebenza. ISnell Foundation incoma ukuthi uma usola ifayela lakho le-isigqoko sokuzivikelaingahle ibe sengozini, bese uyifaka esikhundleni sayo. Uma ngabeisigqoko sokuzivikelaubambe iqhaza kumthelela ngenkathi usetshenziswa, esikhundleni salo.
Ngabe izigqoko zokuphepha ziyaphela?
I-isigqoko sokuzivikelaunempilo yokusebenzisa engafinyelela eminyakeni emi-5 kusukela ngosuku lokukhishwa kuye kumsebenzisi (isb. ukususwa endaweni yokugcina). Kunconywa ukuthi ngemuva kweminyaka emihlanu usebenzise iisigqoko sokuzivikelaubhujisiwe. Ukugqokwa nokudabuka ngokweqile nokusetshenziswa ezindaweni ezimbi kakhulu kunganciphisa kakhulu isikhathi sempilo yomkhiqizo.
Kungani izigqoko zokuzivikela zeSchuberth zibiza kangaka?
Yilapho amagama afana ne-AGV,Schuberthno-Arai bangene bakhombise amandla abo. Lezi phezuluisigqoko sokuzivikelaama-brand ahlala njalo avela ekugcineni okuyisisekelo kokuhamba phambili okuphezuluisigqoko sokuzivikelauhlu ngesizathu. Ukuphela okuphezuluisigqoko sokuzivikelabrand kukhonakuyabizangenxa yalokhu okubalulekile, ubuchwepheshe kanye nocwaningo, okuboniswa ngentengo yamabhodlela abo.
Kubiza malini isigqoko sokuzivikela esihle?
Vuliweisilinganiso, isithuthuthuisigqoko sokuzivikelaizokugijimela ku- $ 150 kuya ku- $ 200 ngokuthize okungaphezu kohlobo olushibhile ongaluthola. Kukhona izigqoko zokuzivikela eziningana ezifanele kulolu hlu lwamanani kumgibeli ofuna i-Isigqoko sokuhloniphekakepha akazimisele ukukhokha amakhulu ama-dollar kuwo.
Ukuhlola kanjani ukungaboni kahle?
Ukuze ukwazi ukuzwa i-kubukhaliobject, ukuhlolwa okuhle kakhuluukuhlolwaisebenzisa iphini yokuphepha noma enyekubukhaliukuphikisa ukubhoboza kancane ubuso, umzimba, nezitho zomzimba ezi-4; isiguli siyabuzwa ukuthi ngabe i-pinprick izizwa ngendlela efanayo nhlangothi zombili nokuthi ukuzwa kunjanibuthuntunomakubukhali.
Ngabe umhloli obukhali usebenza kanjani?
Uchungechunge lwe-PT50 lwe-Edge-On-UpAbahloli Bokubukhalinikeza amandla okulinganisa nokukala izinga le-ubukhalikwanoma yimuphi umkhawulo onikeziwe. Bonasebenzangokulinganisa amandla ngamagremu adingekayo ukusika ngokusebenzisa okulinganiselwe, okulinganiselwe. Umphumela uyinombolo engasetshenziswa ukuqhathanisa isihloboubukhaliyamaphethelo.